China ZBR1001J Optical Isamukeli Manual Ukwenziwa kanye Factory | UZongju
Ibhukwana le-ZBR1001J Optical Receiver
1. Isifinyezo Somkhiqizo
Isamukeli se-ZBR1001JL yi-1GHz FTTB eyamukelayo ebonakalayo yakamuva. Ngobubanzi obubanzi bokuthola amandla we-optical, izinga lokukhipha okuphezulu nokusetshenziswa kwamandla okuphansi. Kuyimishini ekahle yokwakha inethiwekhi yokusebenza ye-NGB ephezulu.
2. Izici Zokusebenza
■ Inqubo yokulawula i-Optical Optical ye-Optical, lapho uhla lwamandla wokufaka lunjalo -9～ ＋2dBm, izinga lokukhiphayo, i-CTB ne-CSO empeleni alishintshiwe;
■ Imvamisa yokusebenza kwe-Downlink enwetshelwe ku-1GHz, ingxenye ye-RF amplifier isebenzisa ukusebenza okuphezulu kwamandla we-GaAs chip, izinga eliphakeme kakhulu lokukhipha elifinyelela ku-112dBuv;
■ I-EQ ne-ATT zombili zisebenzisa isekethe lokulawula ugesi elisebenza ngogesi, lenza isilawuli sibe ngokunembe kakhudlwana, ukusebenza kube lula kakhulu;
■ Isiphenduli sokuphathwa kwenethiwekhi sikazwelonke esijwayelekile II sesigaba sesibili, sisekela ukuphathwa kwenethiwekhi okukude (uma uthanda);
■ Isakhiwo esihlanganisiwe, ukufakwa okulula, imishini yokuqala yokukhetha yenethiwekhi ye-FTTB CATV;
■ Ukunikezwa kwamandla kagesi okuthembeke okuphezulu okwakhelwe ngaphakathi, namandla kagesi angaphandle akhethiwe;
3. Amasu wepharamitha
Ukuthola Amandla Wokubona
I-Optical Return Loss
I-Optical Reverse Wavelength
Uhlobo Isixhumi Optical
I-SC / APC noma icaciswe ngumsebenzisi
I-ZBR1001J (okukhipha i-FZ110)
I-ZBR1001J (okukhipha i-FP204)
Kukalwe Izinga Lokukhipha
Izinga Lokukhipha Eliphezulu
Receiving 108 (-9 ~ + 2dBm yokuthola amandla we-Optical)
Receiving 104 (-9 ~ + 2dBm yokwamukela amandla)
Receiving 112 (-7 ~ + 2dBm yokwamukela amandla we-Optical)
Receiving 108 (-7 ~ + 2dBm yokuthola amandla we-Optical)
Lokukhipha Buyisela Loss
Ibanga le-Optical AGC
(-9dBm / -8dBm / -7dBm / -6dBm / -5dBm / -4dBm) - (+ 2dBm) eguquguqukayo
Isilawuli sikagesi EQ ububanzi
Isilawuli sikagesi uhla lwe-ATT
IMP: AC (150 ~ 265) V
D: DC 12V / 1A Ukunikezwa kwamandla wangaphandle
Qaphela 1: Lungiselela 59 Izimpawu zesiteshi se-PAL-D ze-analog ku 550MHz imvamisa uhla. Dlulisa isignali yedijithali ebangeni lemvamisa le 550MHz～862MHz. Izinga lesiginali yedijithali (ku-8 MHz bandwidth) ngu-10I-dB ingaphansi kwezinga lenkampani yenethiwekhi yesiginali. Lapho amandla wokufaka we-receiver optical eyi--1dBm, izinga lokukhipha: 108dBμV, EQ: 8dB.
4. Vimba UDiagram
I-ZBR1001J enesiphenduli sokuphathwa kwenethiwekhi yeklasi lesibili, umdwebo we-block block wokukhipha we-FZ110 (tap)
I-ZBR1001J enesiphenduli sokuphathwa kwenethiwekhi yeklasi lesibili, umdwebo we-block block we-FP204 (two-way splitter)
I-ZBR1001J FZ110 (thepha) umdwebo webhulokhi yokukhipha
I-ZBR1001J FP204 (i-splitter yezindlela ezimbili) yomdwebo webhulokhi yokukhipha
5. Ithebula Lokuhlobana Lokufaka Amandla Wokubona kanye ne-CNR
6. Indlela ehlanzekile neyokulondoloza yesixhumi esisebenzayo se-fiber fiber
Ezikhathini eziningi, sikubheka kabi ukwehla kwamandla kagesi noma ukunciphisa izinga lokukhipha isamukeli njengamaphutha emishini, kepha empeleni kungabangelwa ukuxhumana okungelona kwesixhumi se-fiber noma isixhumi se-fiber kungcoliswe uthuli noma ukungcola.
Manje wethula izindlela ezivamile ezihlanzekile nezokulondoloza zesixhumi esisebenzayo se-fiber.
1.Qaphela ngokucophelela isixhumi esisebenzayo se-fiber kusuka ku-adaptha. Isixhumi esisebenza nge-fiber esebenzayo akufanele sikhombe emzimbeni womuntu noma ngamehlo anqunu ukugwema ukulimala ngengozi.
2.Wash ngokucophelela ngekhwalithi enhle yokusula iphepha noma ukotini wokwehlisa utshwala. Uma usebenzisa ukotini we-degrease wotshwala wezokwelapha, kusadingeka ulinde imizuzu eyi-1 ~ 2 ngemuva kokuwashwa, vumela indawo yokuxhuma yomile emoyeni.
Isixhumi esisebenzayo esihlanjiwe se-fiber kufanele sixhunywe kwimitha yamandla wokulinganisa ukukala amandla wokukhipha okuqinisekisayo ukuthi kuhlanzwe yini.
4.When isikulufu sihlanze fiber optical isixhumi esisebenza emuva ku-adaptha, kufanele uqaphele ukwenza amandla afanele ukugwema ithubhu le-ceramic ku-adaptha ufa.
5.Uma amandla wokukhipha we-optical engejwayelekile ngemuva kokuhlanzwa, kufanele aqothule i-adaptha bese uhlanza esinye isixhumi. Uma amandla we-optical esephansi ngemuva kokuhlanzwa, i-adaptha ingahle ingcoliswe, uyihlanze. (Qaphela: Qaphela lapho uqothula i-adaptha ukugwema ukulimaza ngaphakathi kwefayibha.
6.Sebenzisa umoya ozinikele onomfutho noma we-degrease alcohol bar bar ukuhlanza i-adaptha. Lapho usebenzisa umoya ocindezelweyo, isifonyo sethangi lomoya elicindezelwe kufanele ligxile kuthubhu ye-ceramic ye-adaptha, ihlanze ithubhu le-ceramic ngomoya ocindezelweyo. Lapho usebenzisa i-degrease alcohol bar bar ukotini, faka ngokucophelela ibha yotshwala yotshwala kuthubhu ye-ceramic ukuze uyihlanze. Inkomba yokufaka kufanele ihambisane, ngaphandle kwalokho ayikwazi ukufinyelela umphumela omuhle wokuhlanza.
7. Incazelo yenkonzo yokuthengisa ngemuva
1.Siyathembisa: Iwaranti yamahhala izinyanga eziyishumi nantathu (Shiya isikhathi sefektri kusitifiketi semfanelo yomkhiqizo njengosuku lokuqala). Isikhathi sewaranti eseluliwe sisuselwa kusivumelwano sokunikezela. Sinesibopho sokunakekelwa kwempilo yonke. Uma iphutha lesisetshenziswa libangelwa ukusebenza ngokungafanele kwabasebenzisi noma izizathu ezingenakugwenywa zemvelo, sizoba nesibopho sokulungisa kodwa sicele izindleko zezinto ezifanelekile.
2. Lapho imishini iphuka, ngokushesha shayela ucingo lwethu losizo lobuchwepheshe i-hotline 8613675891280
3.Ukulondolozwa kwesiza semishini enamaphutha kufanele kusetshenziswe ngochwepheshe abangochwepheshe ukugwema ukulimala okubi kakhulu.
Isaziso esikhethekile: Uma okokusebenza kugcinwe ngabasebenzisi, ngeke sibhekane nesondlo samahhala. Sizocela izindleko ezifanele zokugcinwa kanye nezindleko zempahla.
Langaphambilini LC ukuze LC OM1 Duplex Patch Cord
Olandelayo: LC Ukuze LC OM2 Duplex Patch Cord
Izindlela ezimbili ze-FTTB Optical Receiver ZBR1002D
ZHR1000P FTTH Isamukeli Optical
I-ZBR200 Isiphumo Esibili Sokutholwa Kwe-FTTB AGC
I-ZHR1000MF FTTH Isamukeli se-Fiber Optical
FTTH WDM Fibre Isamukeli Optical
ZHR1000M FTTH Fibre Isamukeli Optical